ASWJ oo caqabad ku ah doorashada Golaha shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
ASWJ oo caqabad ku ah doorashada Golaha shacabka
Ururka Ahlu Sunna ayaa dhawaan soo rogaal celiyey, waxana iminka ay gacanta ku hayaan degaanno ka tirsan Galmudug, iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda u dhaxeysa Ururka iyo Maamulka Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaliya - Walaac iyo hadal heyn badan ayey xilligan abuurtay xaalada ka taagan deegaannada Maamulka Galmudug, waxana dib isku soo hubeeyey Urur diimeedka ASWJ, oo 11 kii sano ee ugu danbeeyey ku xoogaanaa Goballada Dhexe ee Soomaaliya.
Ahlu Sunna ayaa Madaxweynaha Galmudug, Qoor-qoor ku eedeyneysa inuu ku fashilmay wax ka qabashada arrimaha ammaanka iyo tan dib u dhiska degannada Galmudug, waxana baqdin xooggan laga muujinayaa in ay caqabad ku noqdaan howlaha doorashooyinka Golaha Shacabka oo dhawaan deganno ka tirsan Galmudug ka bilaaban doonta.
Galmudug ayaa qorsheyneysa guluf ka dhan ah Ahlu Sunna, ka hor inta aysan bilaaban doorashada Golaha Shacabka,waxana Dhuusamareeb ka degtay ciidamadii ugu badnaa abid, kuwaas oo ay Qoorqoor ku taageereen saaxiibadiisa siyaasadda ee kala ah Madaxweynaha waqtigiidu dhamaaday iyo Taliyihii hore ee Sirdoonka qaranka F&F.
Ahlu Sunna ayaa dhankooda laga dareemayaa diyaar garow xoogan, waxana ciidamada Ururku ay sameysteen fariisimo cusub, kuwaas oo ay macquul tahay in ay difaac ka galaan ama duullaan ka qaadaan.
Arintan ayaa shaki aad u ballaaran galineysa in Galmudug ay ka qabsoonto doorashada Aqalka hoose oo lagu wado in ay ka dhacdo labo magaalo oo Maamulkasi ka tirsan.
Ma jirto wax waan waan ah oo socota waxana xalka keliyah ee uu ku haminayo hoggaanka Galmudug uu yahay adeegsiga awood ciidan, taas oo uu aaminsan yahay inuu libin ku hanan karo, waana tan kaliftay is-casilaadii uu dhawaan xilkiisa uga tagay Wasiirkii amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
Qoorqoor ayaa iska diiday inuu la fariisto Madaxda Ahlu Sunna, waxana uu u arkaa koox diimeed uu waalayo damac siyaasadeed, kuwaasoo aanan aqoon dhabihii ay u mari lahaayeen hanka siyaasadeed ee ku jira.
Ururrada Bulshada Rayidka, ayaa ku talinaya in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan hoggaanka Galmudug iyo kuwa Ahlu sunna, ka hor inta aan la guda galin doorashada Golaha Shacabka, maadaama degannada Maamulkasi laga dareemayo cabsida la xiriirta in howlaha doorashada ay qal qal amni galaan.
Wal-walka ugu ballaaran ayaa waxaa muujinaya dadka rayidka ah, kuwaasoo qaarkood ka barakacay goobihii ay deganaayeen.
Horraantii 2020-ka ayey ahayd markii qaab xoog ah Ahlu Sunna looga saaray inta badan degaannadii ay ka arrimin jireen, waxana rogaal celintooda ay waji kale oo adag u yeeleysa xaaladda Galmudug.